Mvumo uye kodzero muLinux | Kubva kuLinux
Mvumo uye kodzero muLinux
naPerseus | | Zvimwe
Vangani vedu vakamboda "kudzikisira kupinda" kune mafaera ari mune imwe dhairekitori / dhairekitori kana isu tinongoda kudzivirira vamwe vanhu kubva pakuona, kudzima kana kugadzirisa zvirimo mune imwe faira? Kupfuura imwe, handiti? Tinogona kuzviita mune yedu inodiwa penguin? Mhinduro ndeiyi: Chokwadi hongu : D.
Vazhinji vedu vanobva kuWindows, takanga tajaira kubata ne "dambudziko" iri neimwe nzira, kuzadzisa chinangwa ichi taifanira kushandisa nzira "dzisiri dzechokwadi", sekuviga faira kuburikidza nehunhu hwaro, kufambisa ruzivo rwedu ku nzvimbo iri kure kwazvo yechikwata chedu (mukati memakumi makumi maviri emafolda) kuyedza kudzora "muvengi" wedu XD, kuchinja kana kubvisa kuwedzerwa kwefaira, kana "zvakajairika" zvezviito, kurodha chirongwa chinotibvumidza "kuvhara" kwedu dhairekitori kuseri kweNice dialog box inotibvunza isu password kuti tiwane iyo. Isu taive neimwe nzira iri nani? Aihwa.
Maitiro ekumisa maHDD kana zvikamu kuburikidza nemagetsi
Ndine urombo neshamwari dzangu dze "Windoleros" (ndinozvitaura nerudo rukuru kuti pasave neanogumburwa, ok ?;)), Asi nhasi ndinofanira kuzvidzidzisa zvishoma neWindows: P, nekuti ini ndichatsanangura kuti sei iyi OS haitenderi yemuno kuita uku.
Vangani venyu vakaona kuti kana takagara kuseri kwekombuta ye "Windows" (kunyangwe isiri yedu) isu tinobva tangove varidzi vezvose zvine komputa (mifananidzo, zvinyorwa, zvirongwa, nezvimwewo)? Ndinorevei? Zvakanaka, nekutora "kutonga kweWindows", tinogona kuteedzera, kufambisa, kudzima, kugadzira, kuvhura kana kugadzirisa maforodha uye mafaera kuruboshwe nekurudyi, zvisinei kuti tiri "varidzi" veruzivo urwu here kana kwete. Izvi zvinoratidza kukanganisa kukuru kwekuchengetedza muhurongwa hwekushanda, handiti? Huye, izvi zvese ndezvekuti masisitimu anoshanda eMicrosoft haana kugadzirwa kubva pasi kusvika pakuva vashandisi vazhinji. Pakaburitswa vhezheni dzeMS-DOS nedzimwe shanduro dzeWindows, vakavimba zvizere kuti mushandisi wekupedzisira ndiye achave nebasa reku "chengetedza" komputa yavo kuitira kuti pasave neumwe mushandisi aigona kuwana ruzivo rwakachengetwa mariri. ¬ ¬. Iye zvino WinUsers shamwari, iwe unoziva kuti nei paine ichi "chakavanzika": D.
Kune rimwe divi, GNU / Linux, ichive sisitimu yakagadzirirwa zvakanyanya kune network, kuchengetedzeka kweruzivo rwatinochengetera pamakomputa edu (tisingataure pane maseva) kwakakosha, nekuti vashandisi vazhinji vanozove kana vanogona kuwana chikamu yeiyo software zviwanikwa (zvese zvinoshandiswa uye neruzivo) uye Hardware ayo anotarisirwa pamakomputa aya.
Iye zvino tinogona kuona kuti nei kudiwa kwehurongwa hwemvumo? Ngatinyurirei mumusoro wenyaya;).
DU: maitiro ekuona madhairekitori gumi anotora nzvimbo zhinji
MuGNU / Linux, mvumo kana kodzero dzinogona kuve nevashandisi pamusoro pemamwe mafaera ari mariri dzakasimbiswa mumatunhu matatu akanyatsosiyaniswa. Aya matanho matatu anotevera:
<° Zvibvumirano zveMuridzi.
<° Mvumo yeboka.
<° Mvumo yevamwe vashandisi (kana inonziwo "vamwe").
Kujekesa nezve idzi pfungwa, mune network masisitimu (senge penguin) panogara paine chimiro chemubati, superuser kana mudzi. Uyu maneja anotungamira mukugadzira nekubvisa vashandisi, pamwe nekumisikidza iwo maropafadzo ayo mumwe nemumwe wavo achave nawo muhurongwa. Aya maropafadzo anosimbiswa zvese kune wega wega mushandisi HOME dhairekitori uye kune madhairekitori uye mafaera ayo maneja anosarudza kuti mushandisi anogona kuwana.
Muridzi ndiye mushandisi anogadzira kana kugadzira faira / dhairekitori mukati meye dhairekitori repamba (HOME), kana mune imwe dhairekitori iro raanekodzero. Mushandisi wega wega ane simba rekugadzira, nekutadza, mafaera avanoda mukati medhairekitori ravo rekushanda. Mukutaura, iye uye iye chete ndiye achave anokwanisa kuwana ruzivo rwuri mumafaira uye madhairekitori mune yako HOME dhairekitori.
Chinhu chakasarudzika ndechekuti mushandisi wega wega ndeweboka rebasa. Nenzira iyi, kana boka rikachengetedzwa, vese vashandisi variri vanogoneswa. Mune mamwe mazwi, zviri nyore kubatanidza vashandisi vanoverengeka muboka rakapihwa mamwe maropafadzo muhurongwa, pane kupa ropafadzo dzakazvimiririra kune wega mushandisi.
Mvumo yevamwe vashandisi
Chekupedzisira, maropafadzo emafaira ari mune chero dhairekitori anogona zvakare kubatwa nevamwe vashandisi vasiri veboka rebasa mune iro faira riri kutaurwa rakabatanidzwa. Mune mamwe mazwi, vashandisi vasiri veboka rebasa mune iro faira iri, asi vari vevamwe veboka rebasa, vanonzi vamwe vashandisi vehurongwa.
Yakanaka kwazvo, asi ndoziva sei izvi zvese? Zvakareruka, vhura terminal uye uite zvinotevera:
Cherechedza: iwo mavara madiki "L" 😉
Zvichaonekwa chimwe chinhu seinotevera:
Sezvauri kuona, uyu murairo unoratidza kana "kunyora" zvirimo muIYI HOME, zvatiri kubata nazvo mitsara mitsvuku uye mitema. Bhokisi dzvuku rinotiratidza uyo muridzi uye iro girini bhokisi rinoratidza kuti ndeipi boka rimwe nerimwe mafaera nemaforodha akanyorwa kare nderake. Mune ino kesi, vese muridzi neboka vanonzi "Perseus", asi vanogona kunge vakasangana nerimwe boka rakadai se "kutengesa". Kune vamwe vese, usazvidya moyo izvozvi, isu tichaona gare gare: D.
Mhando dzemvumo muGNU / Linux
Tisati tadzidza kuti mvumo dzinoiswa sei muGNU / Linux, tinofanirwa kuziva kuti mhando dzakasiyana dzemafaira idzo sisitimu inogona kuve nemusiyano.
Faira rega rega muGNU / Linux rinozivikanwa nemavara gumi ayo anonzi mask. Pane aya gumi mavara, yekutanga (kubva kuruboshwe kuenda kurudyi) inoreva iyo faira mhando. Iyi inotevera 10, kubva kuruboshwe kurudyi uye mumabhuroko e9, zvinoreva mvumo dzinopihwa, zvichiteerana, kumuridzi, boka uye vamwe vese kana vamwe. A skrini kuratidza zvese izvi zvinhu:
Hunhu hwekutanga hwemafaira hunogona kuve hunotevera:
b Yakakosha Block Faira
c Yakasarudzika mavara faira (tty mudziyo, purinda ...)
l Batanidza faira kana batanidzo (nyoro / yekufananidza chinongedzo)
p Chiteshi yakakosha faira (pombi kana pombi)
Mavara mapfumbamwe anotevera mvumo dzakapihwa vashandisi vehurongwa. Ose matatu mavara, muridzi, boka uye zvimwe mvumo yemushandisi zvinotsanangurwa.
Mavara anotsanangura mvumo iyi anotevera:
- Pasina mvumo
r Verenga mvumo
w Nyora mvumo
x Mvumo yekuuraya
<° Kuverenga: zvinokutendera kuti utarise zvirimo mufaira.
<° Nyora: inokutendera kuti uchinje zvirimo mufaira.
<° Kuuraya: inobvumira iyo faira kuitwe sekunge yaive chirongwa chinogoneka.
<° Verenga: Iyo inobvumidza kuziva kuti ndeapi mafaera uye madhairekitori dhairekitori iro rine iyi mvumo rine.
<° Nyora: inokutendera iwe kuti ugadzire mafaira mune dhairekitori, angave akajairwa mafaera kana madhairekitori matsva. Madhairekitori anogona kubviswa, mafaera akopisirwa kudhairekitori, kufambiswa, kutumidzwazve zita, nezvimwe
<° Kuuraya: inokutendera iwe kuti upfuure dhairekitori kuti ukwanise kuongorora zvirimo, kuteedzera mafaera kubva kana kuenda kwairi. Kana iwe zvakare ukaverenga uye kunyora mvumo, iwe unogona kuita zvese zvinogoneka mashandiro pane mafaera uye madhairekitori.
Cherechedza: Kana iwe usina mvumo yekuuraya, hatizokwanise kuwana iro dhairekitori (kunyangwe tikashandisa iyo "cd" rairo), nekuti ichi chiito chinorambwa. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kudzikisira kushandiswa kwe dhairekitori sechikamu chegwara (seapo patinopfuura nzira yefaira iri mune iro dhairekitori sereferenzi. Ngatiti isu tinoda kuteedzera iyo faira "X.ogg" iri mukati dhairekitori "/ imba / perso / Z" - iro iro iro folda "Z" isina mvumo yekuuraya-, tingaite zvinotevera:
neiri kuwana meseji yekukanganisa ichitiudza kuti hatina mvumo yakakwana yekuwana iyo faira: D). Kana mvumo yekuita dhairekitori ikamiswa, iwe uchave unokwanisa kuona zvirimo (kana iwe wakaverenga mvumo), asi haugone kuwana chero chezvinhu zvirimo, nekuti kune ino dhairekitori chikamu che iyo nzira inodikanwa yekugadzirisa nzvimbo yezvinhu zvako.
Mvumo manejimendi muGNU / Linux
Parizvino, isu taona izvo mvumo kwatiri yeGNU / Linux, inotevera tichaona maitiro ekupa kana kubvisa mvumo kana kodzero.
Tisati tatanga, isu tinofanirwa kuziva kuti kana isu tikanyoresa kana kugadzira mushandisi muchirongwa, isu tinobva tangovapa rombo. Aya maropafadzo, ehe, haazove akazara, ndiko kuti, vashandisi havawanzove vane mvumo imwechete uye kodzero dzeiye superuser. Kana mushandisi akagadzirwa, iyo sisitimu inogadzira nekumisikidza rombo remushandisi refaira manejimendi uye manejimendi manejimendi. Zviripachena, izvi zvinogona kushandurwa nemutungamiriri, asi sisitimu inogadzira mikana yakati wandei kana shoma kune mazhinji emabasa anozoitwa nemushandisi wega pane dhairekitori ravo, mafaera avo, uye pane madhairekitori uye mafaera evamwe vashandisi. Izvi ndizvo zvinowanzo mvumo zvinotevera:
<° Zvemafaira: - rw- r-- r--
<° Zve madhairekitori: - rwx rwx
Cherechedza: iwo haasi iwo mvumo imwechete kune ese GNU / Linux kugoverwa.
Aya maropafadzo anotibvumidza isu kugadzira, kuteedzera uye kudzima mafaera, kugadzira madhairekitori matsva, nezvimwe. Ngatione zvese izvi muchiita: D:
Ngatitorei "Advanced CSS.pdf" faira semuenzaniso. Cherekedza kuti inoratidzika seinotevera: -rw-r--r-- … Yepamberi CSS. Ngatinyatsoongororai.
Tipo mushandisi Girai Vamwe vashandisi (vamwe) Faira zita
- rw- r-- r-- Yepamberi CSS.pdf
<° Rudzi: Archive
<° Mushandisi anogona: Verenga (tarisa zvemukati) uye nyora (gadzirisa) iyo faira.
<° Boka rinoshandiswa nemushandisi rinogona: Verenga (chete) iyo faira.
<° Vamwe vashandisi vanogona: Verenga (chete) iyo faira.
Kune avo vanoda kuziva vari kushamisika panguva ino kuti ndeapi mamwe minda yenyaya yakawanikwa ne ls -l inoreva, iyi ndiyo mhinduro:
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve zvakaoma uye zvakapfava / zvekufananidza zvinongedzo, heino tsananguro uye yavo kusiyana.
Shamwari shamwari, tinosvika pachikamu chinonakidza uye chinorema chechinyorwa chiri kubvunzwa ...
Kuraira chmod ("Chinja modhi") inobvumira kugadzirisa mask kuti zviitwe zvishoma kana zvishoma pamafaera kana madhairekitori, mune mamwe mazwi, ne chmod unogona kubvisa kana kubvisa kodzero dzerudzi rwese rwemushandisi. Kana mhando yemushandisi watinoda kubvisa kwaari, kuisa kana kupa ropafadzo isina kutaurwa, chii chichaitika kana uchiita basa iri kukanganisa vese vashandisi panguva imwe chete.
Chinhu chekutanga chekurangarira ndechekuti isu tinopa kana kubvisa mvumo pamatanho aya:
Parameter Chikamu Descripcion
u muridzi muridzi wefaira kana dhairekitori
g boka boka rine iyo faira iri
o vamwe vamwe vese vashandisi vasiri muridzi kana boka
Ipa muridzi mvumo yekuita:
Bvisa ita mvumo kubva kune vese vashandisi:
Ipa mvumo yekuverenga nekunyora kune vamwe vashandisi:
Siya chete verenga mvumo kune boka iro iro rairi faira iri:
Mvumo mune octal manhamba fomati
Pane imwezve nzira yekushandisa iyo chmod yekuraira iyo, kune vazhinji vashandisi, iri "kusununguka zvakanyanya", kunyangwe iri priori iri rinotomhanyisa kunzwisisa ¬¬.
Iko kusanganiswa kwemitengo yeboka rega rega revashandisi inoumba octal nhamba, iyo "x" chidimbu ndeye makumi maviri iri 20, iyo w bit i1 iri 21, iyo r bit i2 iyo iri 22, isu tine ipapo:
Iko kusanganiswa kwemabheti akavharwa kana kudzimwa muboka rega rega kunopa kusanganisa kusere kwehunhu, ndiko kuti, huwandu hwemabheti pa:
Pamusoroi Octal kukosha Descripcion
- - - 0 hauna mvumo
- - x 1 ita mvumo chete
- w - 2 nyora mvumo chete
- wx 3 nyora uye ita mvumo
r - - 4 verenga mvumo chete
r - x 5 verenga nekuita mvumo
rw - 6 verenga uye nyora mvumo
rwx 7 mvumo dzese dzakaiswa, kuverenga, kunyora nekuita
Paunosanganisa mushandisi, boka, uye zvimwe mvumo, unowana matatu manhamba anoita iyo faira kana dhairekitori mvumo. Mienzaniso:
Pamusoroi Valor Descripcion
rw- --- -- 600 Muridzi akaverenga nekunyora mvumo
rwx --x --x 711 Iye muridzi akaverenga, kunyora nekuita, iro boka uye vamwe chete vanoita
rwx rx rx 755 Iyo kuverenga, kunyora uye kuuraya muridzi, boka uye vamwe vanogona kuverenga nekuita iyo faira
rwx rwx 777 Iyo faira inogona kuverengerwa, kunyorwa uye kuurayiwa nemunhu wese
r-- --- -- 400 Iye chete muridzi ndiye anogona kuverenga iyo faira, asi kana anogona kuigadzirisa kana kuitisa uyezve kana iro boka kana vamwe havagone kuita chero chinhu mariri.
rw- r-- --- 640 Muridzi wemushandisi anogona kuverenga nekunyora, boka rinogona kuverenga faira, uye vamwe havagone kuita chero chinhu
Pachine mamwe marudzi emvumo yekutarisa. Aya ndiwo maSUID (Set User ID) bvumo yemvumo, iyo SGID (Set Group ID) mvumo zvishoma, uye iyo inonamira bit (inonamira zvishoma).
Iyo setuid bit inogoverwa kumafaira ekushandisa, uye inobvumira kuti kana mushandisi achigadzira iyo faira, maitiro acho anowana mvumo yemuridzi weiyo yakaurayiwa faira. Muenzaniso wakajeka wefaira rinobatika ne setuid bit ndeiyi:
Tinogona kuona kuti chidimbu chakapihwa se "s" mukutora kunotevera:
Kugovera ichi chidiki kune faira zvingave:
Cherechedza: Tinofanira kushandisa chidimbu ichi nehanya zvakanyanya sezvo chichigona kukonzera kukwira kweropafadzo musystem yedu.
Iyo setid bit inobvumidza kuwana iwo maropafadzo eboka rakapihwa iyo faira, iro zvakare rinogoverwa kumadirector. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kana vashandisi vakati veboka rimwe chete vachida kushanda nezviwanikwa mukati medhairekitori imwechete.
Kugovera ichi chidiki tinoita zvinotevera:
Ichi chidiki chinowanzo kupihwa mumadirector anowanikwa nevashandisi vese, uye inobvumidza kudzivirira mushandisi kubva mukubvisa mafaera / madhairekitori emumwe mushandisi mukati meiyo dhairekitori, nekuti vese vane mvumo yekunyora.
Tinogona kuona kuti chidimbu chakapihwa se "t" mukutora kunotevera:
Hesi shamwari, ikozvino unoziva kudzivirira zviri nani ruzivo rwako, neizvi ndinovimba unorega kutsvaga dzimwe nzira Folder Lock o Dhairekita Guard kuti muGNU / Linux hatidi ivo zvachose XD.
PD: Ichi chinyorwa chakakumbirwa nemuvakidzani wehama yeshamwari XD, ndinovimba ndakagadzirisa kusahadzika kwako ... 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Mvumo uye kodzero muLinux
Yakanaka chinyorwa, yakanyatsotsanangurwa.
Thanks shamwari 😀
Kwakanaka Perseus, ini ndakanga ndisina zano nezve mvumo mu octal manhamba fomati (inova inonakidza roll) kana yakasarudzika mvumo (setuid / setgid / inonamira).
Ini ndanga ndichifa nehope asi izvi zvakandisimudza zvishoma, ndave kutoda kubata koni yacho +1000
Chinhu chakanaka kuti chakabatsira kwauri, Kwazisai 😉
Kwakanaka, tsananguro dzakajeka, maita basa kwazvo.
Izvo zvishoma setuid inokutendera iwe kuwana iwo maropafadzo
muchikamu icho pane kukanganisa kudiki.
Kutenda nekucherechedza uye nekupindura, dzimwe nguva minwe yangu inowana "kubatikana" XD ...
Ini ndatogadziriswa kare 😀
Chinyorwa chakanaka kwazvo, Perseus. Zvisinei, ini ndoda kuona zvimwe kuitira kuti ruzivo rwacho ruve rwakakwana.
Ngwarira paunenge uchishandisa mvumo uchidzokorora (chmod -R) nekuti tinogona kupedzisira tapa mafaera akawandisa mvumo. Imwe nzira yekutenderedza izvi ndeyokushandisa iyo yekuwana yekuraira kusiyanisa pakati pemafaira kana maforodha. Semuyenzaniso:
Chimwe chinhu: kumisikidza ropafadzo pane madhairekitori kana mafaera haisi nzira isingakanganisi yekuchengetedza ruzivo, nekuti ne LiveCD kana kuisa hard disk mune imwe PC hazvinetsi kuwana maforodha. Kuchengetedza ruzivo rwakashata zvinofanirwa kushandisa zvishandiso zvekunyorera. Semuenzaniso, TrueCrypt yakanaka kwazvo uye zvakare iri muchinjika-chikuva.
Uye pakupedzisira: nekuda kwekuti vazhinji vashandisi havachinje mafaira masystem muWindows hazvireve kuti hazvigoneke kuzviita. Zvirinani iyo NTFS faira system inogona kuchengetedzwa zvakanyanya seEXT, ndinoziva nekuti mune rangu basa ndine zvikamu zvakakwana pasina kuuraya kana kunyora mvumo, nezvimwe. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza neyekuchengetedza tebhu (iyo inowanzo kuvanzwa). Dambudziko guru neWindows nderekuti kusarongeka kwayo kunotendera zvese.
Ndatenda zvikuru nekuwedzera musoro wenyaya;). Nezve:
Wataura chokwadi, kunyangwe neWin chinhu chimwe chete ichiitika, pamwe gare gare tichataura nezve akasiyana maturusi anotibatsira kunyorera ruzivo rwedu.
Hugo shamwari uri sei 😀
Dambudziko ne TrueCrypt ... iro rezinesi chinhu "chinoshamisa" icho chainacho, unogona here kutiudza zvimwe nezvazvo? 🙂
Iyo TrueCrypt rezinesi ichave isinganzwisisike, asi ingangoita vhezheni 3.0 yelayisensi (inova iyo yazvino) inobvumidza kushandiswa kwemunhu nekutengesa pazvivakwa zvisina muganho, uye zvakare inobvumidza kuteedzera, kuongorora iyo kodhi kodhi, kugadzirisa uye kugovera zvinobva pamabasa ( Chero bedzi yakapihwa zita), saka kana isiri 100% yemahara, kutaura chokwadi iri padyo padyo.
Wekare Perseus anosiya iro rese rakashata timu nezvinyorwa zvake zvekuve izvo zvakakwana.
Hapana munhu pano ari nani kupfuura munhu huh? Uye zvakanyanyisa kuderera kupfuura ini HAHAHAJAJAJAJA
hahahaha, chenjera shamwari, rangarira tiri muchikepe chimwe chete 😀
Mvumo, chimwe chinhu chinodzidziswa zuva nezuva, kwete kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, saka ngatidzidzei hehehehe
Pindura kune jqs
Yakanaka chinyorwa Perseus.
Zano: hazvidi kuti unyore chikwangwani kune chimwe nechimwe chiratidzo, zvinokwana kuratidza kamwe chete. Muenzaniso:
Inogona kutaridzika senge
inogona zvakare kutaridzika senge
uchitevera iwo fomati iwe unogona kuita izvi
$ a-rwx, u + rw, g + w + kana example.txt
chitsamba: a = zvese.
Wow shamwari, ini ndanga ndisingazive iyo, ndatenda nekugovana 😀
Chinyorwa chakanaka kwazvo, zvese zvakanyatsotsanangurwa.
Zviri nyore kwandiri kuti ndichinje mvumo yemafaira octally, zvakajeka. Ini ndinozviwana zvakakwana kuti ndinzwisise imwe nzira asi iyi yanga iri nguva refu yapfuura hahaha
Pindura kune mortadelo_666
Mhoro vanhu, pira; Ndakafarira peji racho. Ndinoda kubatana nayo. Zvinoita here nekudzvanya panick yangu une mareferenzi !! haha.
Ini ndinowanzo gadzira zvinyorwa zveapo neapo, uye ini ndinonyanya kuita mutsigiri weSL, chimwe chinhu chandisingazorega muhupenyu hwangu chero bedzi ndiripo uye ndiine mimwe minwe. Zvakanaka, ndinofungidzira vane email yangu. kumbundira uye simba neprojekiti inoita kwandiri «mabloggi akabatana!», ACA ES LA TRENDENCIA !! Aya ndiwo marongero ewebhu emangwana.
Hahahahaha, zvingave zvinofadza kwazvo kuti iwe ubatane nesu, rega elav kana gaara vaone chikumbiro chako 😉
Chenjera uye ndinovimba kukuona pano munguva pfupi 😀
Ndiri kukunyorera email ikozvino (kukero yawakaisa mumashoko) 🙂
Ndine kusahadzika. Maitiro aungaite mvumo kune madhairekitori uye kuti izvi hazvichinje hunhu hwavo, zvisinei nemushandisi anozvishandura, kusanganisira mudzi.
Pamwe ichi chinyorwa Ini ndinojekesa zvishoma ..
Yakanyorwa zvakanaka chinyorwa ichi, ndatenda nekugovana ruzivo
Zvakanakira sei kubatsira, tinotarisira kukuona pano zvakare. Kwaziso 😉
Ndiri kufara kwazvo kuti zvakabatsira kwauri, kwaziso 😉
Chokwadi chandisingabvumire mu linux kufambisa faira kufaira Sisitimu iri musoro. iwe unofanirwa kupa mvumo kune zvese uye nyora password yako. mumahwindo kufambisa mafaera zviri nyore, kunyangwe mune imwechete windows folda maitiro ese ekufambisa faira kufaira mune linux kana mumawindows zviri nyore kuteedzera nekuteedzera. Ini ndinoshandisa ese ari maviri masystem anoshanda. mint 2 Maya sinamoni uye mahwindo 13
Ndanga ndichishandisa Linux kwemakore mashoma ikozvino, uye chokwadi handina kumbove nematambudziko aya kwenguva yakati rebei.
Ini ndinogona kufambisa mafaera / maforodha pasina kana dambudziko, uye ini ndine yangu HDD yakakamurwa muna 2. Zviripachena, kuti ndiwane iyo imwe partition kekutanga nguva yandinofanira kuisa password yangu, asi kwete zvakare.
Kana iwe uine dambudziko risingawanzoitika, tiudze, isu tinofara kukubatsira iwe 😉
Ruramisa chinyorwa kusvika kuchikamu cheLinux. Mune ako makomendi ekugadzirisa mvumo muWindows: Hauzive zvachose kuti mvumo dzinoiswa sei. Kudzora kweaya esimba rakakwira zvakanyanya (kunze kwema 16 bit versions, Windows 95, 98, Me nenhare mbozhanhare) kumabatirwo avanoitwa mune penguin system uye neyakaipisisa granularity, uye nezvechinyorwa chandinoita nezvose anoshanda masystem hapana manias anopikisana nemumwe wedu.
Zano rangu: tsvaga zvishoma uye iwe uchaona, hapana zvekunze zvirongwa zvakakosha zvachose. Kune ese akanaka kwazvo. 😉
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Nyaya yemvumo chinhu chinonakidza kudzidza. Zvakaitika kwandiri kamwechete kuti ndisakwanise kuwana iyo faira munzira refu, nekuti ini ndaive ndisina mvumo mune imwe ye madhairekitori. Izvo zvakare zvakanaka kuti uzive zvirinani kuvepo kweakakosha mvumo senge iyo inonamira nhete.
PS: Ndanga ndichitevera iyo blog kwechinguva asi ndakanga ndisina kunyoresa. Ivo vane zvinyorwa zvinonakidza asi chakabata pfungwa dzangu zvakanyanya kurapwa pakati pevashandisi. Kupfuura chokwadi chekuti panogona kuve nemisiyano, kazhinji, munhu wese anoedza kubatsirana nekupa zvavakasangana nazvo. Ndicho chimwe chinhu chinoshamisa, kusiyana nemamwe masosi azere netrolls nemarimi emoto 😉
Inonakidza kwazvo, asi ini ndakaidzidza zvakasiyana nezve mvumo, panzvimbo paOctal, muBinary, kuitira kuti kana, semuenzaniso, "7" iri 111, zvaireva kuti yaive nezvibvumirano zvese, saka kana ukaisa 777 iyo Unopa. mvumo yese kune vese vashandisi, mapoka ...
Pindura kuna Francisco_18
Inonakidza, yakapfupika, yakajeka uye pamusoro wenyaya.
Chinyorwa chakanaka sei, makorokoto uye nekutenda kune ese kujekesa… ..
Pindura kuna tommy
Nhamo kana ndikadzidza zvakawanda nevadzidzi vako, ndinonzwa kunge hwiza mudiki mune iri rakakura munda iri Linux, asi kudzikamisa zvakambotaurwa naHugo pano, mumutsara wemashoko kana tikaisa cd inorarama uye kana mafaera edu asina kunyorwa Hapana chaizvo zvakasara kuti zvidzivirirwe, pamusoro peWindows ndinofunga pakanga pasina dambudziko rakawanda kugadzira mushandisi wemubati uye akaundi yakaganhurwa mukati mehwina sisitimu uye nekudaro dzivirira yako account yedhairekita…. Asi chaizvo ndinokutendai zvikuru nechinyorwa chino ini ndiri kunyanya kuziva mune iyi nyaya ndinokutendai ...
Pindura kuna gabux
Chokwadi ndechekuti ini ndaida kumhanyisa inoitisa xD uye yakandiudza mvumo yakaramba kana ndichivhura nekunyora x mafaera asi ini ndakaverenga zvishoma apa ndikadzidza chimwe chinhu uye zvakashanda kuona mvumo iyo iro dura iro raive nemafaira uye aigona kuitirwa chinhu chekupedzisira chandinorangarira chandakaita ndechekuti ini ndaida kuwana dhairekodhi uye sezvo zita racho raive rakareba ndakachinja uye pakati peiyo nyore xD, ipapo ndakatarisa mvumo uye ndakatarisa chimwe chinhu chakataura nezve adm ndakaenda kune iyo faira ini isa zvivakwa uye wakasarudza chimwe chinhu chakanzi adm ipapo pasina kubvisa zvivakwa pinda mufaira uye wotomhanya izvo zvinogona kuitika uye zvinogona kutanga zvisina matambudziko izvo izvo zvandisingazive ndizvo zvandakaita xD chokwadi ndechekuti, handizive kuti yaive nekuti ini akachinja zita refaira asi ini handizive uye nekutenda ndakakwanisa kuita Hapana dambudziko.
Pindura kuna juancho
Mhoro ndine mibvunzo,
Ndine dandemutande system iyo inofanirwa kunyora mufananidzo kune iyo linux server,
ruzivo nderekuti haibvumidze kuinyoresa, edza kushandura mvumo asi hazvigone,
Ini ndiri mutsva kune izvi, nekuti ndinoda kuti unditungamirire, ndatenda.
Enda kuti izvi zvakandibatsira, ndinokutendai zvikuru nemupiro.
Ini pachangu, zvinyorwa zvakandibatsira kudzidza, iyo yakaiswa mukuita mune chiitiko pabasa rangu.
Maitiro akakodzera andakaita aive paDebian. Makorokoto nekwaziso.
Ngirozi Yocupicio akadaro
Yakanaka dzidziso pamvumo muGNU / Linux. Ruzivo rwangu semushandisi weLinux uye semubatiri wemaseva zvinoenderana nekuparadzirwa kweGNU / Linux ndezvekuti mazhinji ematambudziko ehunyanzvi anogona kumuka anoenderana nekutungamira kwemvumo yemapoka nevashandisi. Ichi chinhu chinofanira kutarisirwa. Ndinokorokotedza Perseus nekuda kweblog rake uye ndinofarirawo kujoina mauto eGNU pane ino blog. Kwaziso kubva kuMexico, shamwari!
Pindura kuna Angel Yocupicio
Mhoro, kutanga kwezvose ndinokukorokotedza iwe zvakanaka kwazvo chinyorwa uye ini ndinobvunza iwe ndine iyi kesi: 4 ———- 1 mudzi mudzi 2363 Feb 19 11:08 / etc / mumvuri une 4 kumberi kuti mvumo idzi dzaizoverengerwa sei.
Windows: Isu tinosarudza dhairekitori, bhatani chairo, zvivakwa> Chengetedzo tebhu, ipapo unogona kuwedzera kana kudzima vashandisi kana mapoka, uye yega yega isa mvumo yaunoda (kuverenga, kunyora, kutonga kwakazara, nezvimwewo). Handizive kuti iwe gehena iwe unorevei
Nenzira, ini ndinoshandisa linux mazuva ese, ini ndinoshandisa yekutanga, zvinoenderana ne ubuntu.
zvinoshamisa kuti ndicho chinyorwa chakatsanangurwa zvakanakisa
Pindura kuna artur24
Jorge Painequeo akadaro
Mupiro wakanaka kwazvo, wakandibatsira zvakanyanya.
Pindura Jorge Painequeo
Mwanakomana wechihure, izvi hazvitombo shande.
Vangani venyu vaona kuti kana takagara kuseri kwe "Windows" komputa Chikamu ichocho manyepo zvachose, nekuti kubvira Windows NT, kunyangwe pamberi peWindows 98 uye dambudziko iro rausina chengetedzo inhema zvachose.
Kuchengetedzwa muWindows chinhu chinonzi Microsoft chakatora zvakanyanya pachikonzero ndicho chinonyanya kushandiswa desktop desktop system nhasi.
Chinyorwa ichi chakanyatsotsanangurwa nezve mvumo yeGNU / Linux asi iwe wasvetuka sezvazvinowanzoitika muzvinyorwa izvi kuti uyo anozvinyora haashandise Windows kana haazive mashandisiro azvo nekuti havazvifarire uye vanongowana. ongororo isina kunaka.
Izvo zvinofanirwa kusimbiswa ndezvekuti Windows yakachengeteka kwazvo mune yayo faira sisitimu ine ACL (Yekushandisa Kudzora Rondedzero) hunhu iyo iyo inotakura muWindows kubva kune ese Windows NT inoita kuti iyo system system ive yakachengeteka kwazvo. MuGNU / Linux ivo vakaishandisawo.
Sezvo Windows Vista iyo UAC (Yekushandisa Akaundi Kudzora) inoitwa uye ichiita kuti igadzikane kushandisa Windows pasina kuve mutariri kuti uishandise zvakanaka.
Kwandiri, chinhu chakanaka chavakaisa nekuti kushandisa Windows XP semushandisi pasina mvumo yekutonga kunogona kuitwa, asi kumba, ndiani akaishandisa saizvozvo? hapana kana munhu nekuda kwekusagadzikana kwaive kwekusava nechimwe chinhu senge UAC.
Ko kana zvave pachena kwandiri kuti chero munhu akanyora chinyorwa akaita achiziva zvaari kunyora kunyangwe asina kutsanangura iyo GNU / Linux ACL.
TuxInfo Magazini Nro. 44 yakagadzirira kurodha pasi
Infographic: Iyo Ramangwana reFaira Kugovana Mushure mekudzima kweMegaupload